लकडाउन उल्लघंन गर्दै हुनुहुन्छ ? जरिवानामा परिएला - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ लकडाउन उल्लघंन गर्दै हुनुहुन्छ ? जरिवानामा परिएला
लकडाउन उल्लघंन गर्दै हुनुहुन्छ ? जरिवानामा परिएला
सिन्धु खबर शुक्रबार, २०७७ जेठ २ / १७:१२
चौतारा । जिल्लामा लकडाउन उल्लघंन गर्नेलाई जरिवाना लिन सुरु गरिएको छ । आजबाट लकडाउन उल्लघंन गर्ने सवारी साधन र मानिसलाई जरिवाना लिन सुरु गरिएको हो । लकडाउन उल्लघंन गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रहरी प्रशासनले जरिवाना लिने निर्णय गरेको हो ।
अब लकडाउन उल्लघंन गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने सवारी साधनलाई ट्राफिक उल्लघंन वापतको जरिवाना लिई कारवाही गर्न सुरु गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव काफ्ले (डीएसपी)ले जानकारी दिए । आज चौतारामा लकडाउन उल्लघंन गर्ने २७ जनालाई जनही एक सय रुपैयाँ जरिवाना लिइ छाडिएको छ ।
उनीहरुलाई तीनघण्टासम्म टुडिखेलमा राखी सम्झाइ बुझाइ गरिएको थियो । साथै लकडाउन उल्लघंन गरेका १९ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई ट्राफिक उल्लघन गरे वापतको जरिवाना लिई छाडिएको छ । लकडाउन उल्लघंनलाई कम गर्न आजबाट जरिवाना लिन थालिएको डीएसपी काफ्लेले बताए ।
`लकडाउन उल्लंघन गर्नेको सबै तथ्याकं संकलन गरिन्छ डीएसपी काफ्लेले भने, पटके उल्लघंन गरेको देखिए संक्रमण ऐन २०२० बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।` संक्रमण ऐन अन्तर्गत एक सय रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना जेलको व्यस्था छ ।
आजै बाह्रबिसेबाट ६ जना र जलबिरेबाट ५ वटा बाइक नियन्त्रणमा लिएको काफ्लेले बताए । चौतारामा लकडाउन उल्लघंन गर्नेलाई जरिवाना लिन सुरु गरेको प्रशासनले लकडाउन उल्लघंन गर्ने क्रम नघटेमा अन्य ठाउँमा पनि जरिवाना लिने बताएको छ ।